राजनीतिको फोहोरी खेल – NepalayaNews.com
राजनीतिको फोहोरी खेल
२२ असार २०७३, बुधबार १६:१०
नेपालमा मनसुन र भनसुनको चर्चा बढी नै हुन्छ । मनसुन बिना नेपालको कृषि क्षेत्र रनाहामा पर्छ । कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिसम्म भनसुन चल्छ । त्योभन्दा बढी अचेल सरकार परिवर्तनको चर्चा चल्न थालेको छ । २ महिनाअघि सरकार फेर्ने कसरत माओवादीले गरेको थियो कांग्रेससँग मिलेर । केपी ओलीले बजेटसम्म पेस गर्न पाउनुपर्ने याचना गरेपछि र माओवादीसँग केही सहमति गरेपछि सरकार परिवर्तनको खेल रोकिएको थियो । अहिले फेरि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय नै गरेको जस्तो समाचार सार्वजनिक भएका छन् । सरकारबारेको निर्णय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्ने निर्णय उक्त पार्टीले गरेको छ ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको काम नै छायाँ मन्त्रीमण्डल बनाएर बस्ने हो । सरकारलाई खबरदारी गर्ने उनको कर्तव्य हो । सरकारलाई दायाँबायाँ तलमाथि तलबितल गर्ला भनेर प्रतिपक्षले खबरदारी गर्नुपर्नेमा प्रतिपक्ष कांग्रेस माओवादीलाई उचालेर सरकार बदल्ने खेल खेल्न तल्लिन छ । शेरबहादुर देउवा कांग्रेस सभापति भएर आइसकेपछि उनले विधान त गर्नुपर्ने आफ्नै पार्टीको काम गर्न नसकेकामा आलोचित छन््, जुन कुरा हिजो उनले सुशील कोइरालालाई आरोप लगाउँथे, त्यही कुरामा चुकेका छन् । तर उनको ध्यान सरकार बदल्ने खेलमा छ ।
के नेपालमा अहिले सरकार बदल्ने फेर्ने बेला हो ? आम नेपालीलाई यो प्रश्नको जवाफ दिने फुर्सद पनि छैन । भूकम्प पीडितले राहत पाएका छैनन् । पहिला कांग्रेस भूकम्प पीडितलाई एकैचोटि राहत दिनुहुन्न भन्ने कानुन बनाउन लाग्यो, अहिले एकैचोटि दिनुपर्छ भनेर कोकोहोलो मच्चाइरहेछ । हो यस्तै यस्तै कारणले राजनीतिलाई डर्टी गेम भनिएको हो । अहिले नेपाललाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा प्रवेश गराउनु छ । आर्थिक समृद्धिको सर्त भनेको राजनीतिक स्थिरता हो । के माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल वा शेरबहादुर देउवा वा अरु कुनै प्रधानमन्त्री हुँदैमा अहिले केपी ओलीले गर्न नसकेका काम गर्ने ग्यारेन्टी छ ? होइन भने किन हटाउनुप¥यो ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट ? बरु प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुपर्ने के के हो त्यो गर भनेर कांग्रेस र माओवादीले भने हुँदैन ?
अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्नु नेपाली राजनीतिको प्रमुख दायित्व हो । त्यतापट्टि जानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय, प्रादेशिक र संसदको निर्वाचनको कार्यतालिका पनि बनाए । त्यसको पनि कांग्रेस विरोध गरिरहेछ । निर्वाचन नगर्नु भनेको यो संविधान कार्यान्वयन नगर्नु हो । आफ्नै नेतृत्वमा बनाएको संविधान कांग्रेस कार्यान्वयन गर्न चाहन्न ? होइन भने यो राजनीतिको फोहोरी खेल कहिलेसम्म ? यसै पनि नेपाली राजनीतिमा संसद खरिदबिक्री र पजेरो संस्कृति जस्ता फोहोरी खेल भिœयाउने प्रमुख व्यक्तिका रुपमा शेरबहादुर देउवालाई जान्छ । त्यो दाग मेट्न पनि उनले फोहोरी खेल खेल्न छाडेर राजनीतिक स्थिरताका लागि कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ । होइन भने इतिहासले उनलाई माफी गर्ने छैन । यसै पनि ओरालो लागेको माओवादी पार्टीको साख पनि झनै ओरालो लाग्ने निश्चित छ । तत्काललाई एमालेप्रति सदभाव जाला तर अन्तत देशलाई ठूलो घाटा हुन्छ । जनतालाई बेफाइदा हुन्छ । देशले अझै दुर्गति बेहोर्नुपर्छ । त्यसैले बन्द गर यो राजनीतिको फोहोरी खेल ।
लोक गायक प्रेमराजा महत दम्पतीलाई कोरोना संक्रमण २२ असार २०७३, बुधबार १६:१०
टिकटक र विच्याट प्रतिवन्ध गर्ने ट्रम्पको आदेश महत्वपूर्ण होइन– विज्ञ २२ असार २०७३, बुधबार १६:१०
हङकङको स्वतन्त्रता खोसिनुमा जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै अमेरिकाले लाममाथि लगायो प्रतिबन्ध २२ असार २०७३, बुधबार १६:१०